Sidee loo helaa PR9 dhabarka dambe ee gaaban?
Si aad ganacsigaaga uga dhigto muuqaal Google, waxaad u baahan tahay inaad ku daro liiska 1aad ama ugu yaraan bogga natiijada raadinta 2aad. Way adagtahay in aad riixdo boggaaga ilaa TOP ee SERP Google sida tartanka dhammaan noocyada suuqyada waa sare. Laba arrimood oo muhiim ah oo ka dhigi kara ganacsiga internetka ee barwaaqada ah waa raadinta mashiinka raadinta iyo xayeysiiska xayeysiinta ah. Inkastoo mushaharka xayeysiiska riixa uu aad ugu qaali karo ganacsiyada qaar, isugeynta raadinta raadinta waxaa lagu sameyn karaa kharash yar. Si kastaba ha ahaatee, waxaa habboon in la sheego in aad u baahan tahay inaad ogaato dhammaan dhinacyada istaraatijiyeynta iyo fikradaha iyo sidoo kale caqabado iyo xirfado si loo abuuro olole guulaysi ah. Nasiib wanaag, waxaa jira waxyaabo badan oo SEO ah sida sidan, si gaar ah loogu talagalay in aad ka dhigto joogitaanka bulshadaada xoog.
Qodobkan waxaa loogu talagalay mawduuca dhismaha PR9 dhabarka dambe. Waxaad baran doontaa sida qiimaha dib-u-habboon ee ganacsigaaga iyo waxa ilaha websaydhka ah iyo qaababka bulshada ee aad u isticmaali karto si aad u dhisto xiriirka ugu-haboon ee tayada soo socda ee goobtaada.
Maxaad u baahan tahay inaad dib u dhisto dhabarka dambe ee ilaha webka PR9?
Shabakadaha bulshada ee sida caanka ah ee Facebook, Twitter, iyo LinkedIn waxay leeyihiin PageRank badan oo aad u fiican liiska baarista SEO. Mashruucyadani waa meelaha ugu fiican ee goobtaada lagu sheegayo. Abuurista dhabarkaaga bloggaaga laga helo ilaha webka PR9 waxay u badan tahay inay saameyn ku yeeshaan jagadaada boggaaga Google. Taasi waa sababta ay tahay fikrad caqli-gal ah in ay adeegsato kaalintooda sare ee lacagtaada adoo dib-u-celin ugu diraya blog-kaaga. Haddii wax walba si sax ah loo sameeyo, waxaad heli doontaa awood dheeraad ah oo ku saabsan makiinadaha raadinta iyo darajada sare.
Waxaa jira laba nooc oo suurtagal ah oo dib u qaabeyn ah oo aad ka heli kartid websaydhka sare ee PR - dofollow iyo nofollow. Backlinks dib u lahaanshaha waxay leeyihiin qiimo aad ku geli karto boggagaaga maaddaama ay ku wareejinayaan casiirka xidhiidhka. Mashiinnada raadinta waxay ogaanayaan calaamadaha ka yimaada ilaha rasmiga ah ee dib-u-celinta waxayna siiyaan boggaaga darajo sare. Xidhiidhada "nofollow" tag lama ogaan karo qoryaha raadinta iyo keena qiime aan lahayn qiimeeynta boggaaga. HTML, dofollow waa code default default for links. Waxay u baahan tahay inaan ku darin wax khaas ah URL-yada shabakadaha. Taas bedelkeeda, backlinks nofollow waxay u baahan tahay amar gooni ah oo muujinaya in isku xirka aan lagu tirin in darajo.
Sidee loo helaa PR9 dhabarka danbe?
Habka ugu fudud ee lagu abuuri karo dib-u-celin PR waa inuu sameeyo faallooyin ama abuuro bog bog. Laakiin marka hore, waxaad u baahan tahay inaad sameyso cilmi baaris oo aad eegto tirakoobka darajooyinka ilaha webka la xiriira iyo tixgelin nooca gaadiidka ay keeni doonaan goobtaada.
Aan eegno mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu sareeya PR kaas oo keeni doona cabitaanka tayada leh ee goobtaada. Waxaad u baahan tahay inaad abuurto boggaaga ganacsiga bogga Facebook, ka dibna tag "Ku dar HTML Static page to page" link oo ka tag URL bogga rasmiga ah halkan. Kadib waxaad u baahan tahay inaad hesho "Isticmaal" badhanka oo ka saar feylka, index. html. Qeybtan waxaad u baahan tahay inaad ku darto xiriirkaaga internetka ee qaabka soo socda: Magacaaga Magaca . Si aad u dhameeysid geeddi-socodka sameynta gadaal dofollow ah ee Facebook, waxaad ubaahan tahay inaad gujiso "Bixinta iyo Daabac" badhanka. LinkedIn
Abuurista dofollow backlinks on LinkedIn waa ku dhowaad isku mid ah sida on Facebook. Waxaad ubaahan tahay inaad abuurto koontadaada ganacsigaaga iyo qaybta "info personal information" waxaa ka mid ah gadaashaada joogtada ah ee dofollow. Xidhiidhada kale ee aad ku dhisi kartid boggani waxay noqon doontaa mid nofollow ah Source .